ရိုးရာဝတ်စုံနှင့်အတူ ဖြူစင်သောအပြုံးတွေကြောင့် ရေပန်းစားလာခဲ့သော ၁၀နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး
ရိုးရာဝတ်စုံနှင့်အတူ ဖြူစင်သောအပြုံးတွေကြောင့် ရေပန်းစားလာခဲ့သော ၁၀နှစ်အရွယ် ကလေးမလေး မိန်းကလေးငယ်သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ Quang Tri ပြည်နယ် Da Krong တောင်တန်းဒေသတွင် မွေးဖွားလာသော Pa Coလူမျိုးဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲသောမိသားစုမှ ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ မိန်းကလေးသည် ညီအစ်မနှစ်ယောက်သာရှိပြီး ကျောင်းတက်ရန်မတတ်နိုင်ပဲ မိသားစု စားဝတ်နေရေးအတွက် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နှင့် လယ်ကွင်းထဲ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း မိန်းကလေးသည် တစ်ချက်ငြီးငြူခြင်းမရှိပဲ တက်တက်ကြွကြွရှိကာ မျက်နှာလေးအမြဲပြုံးနေသည်။မိန်းကလေးသည် ဆင်းရဲသောဘဝကို ဖြတ်သန်းနေရသော်လည်း ဖျော်ဖြေရေးအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သည့် အိပ်မက်ရှိခဲ့သည်။ ကံကောင်းချင်၍ မိန်းကလေးငယ်သည် လာရောက်လည်ပတ်သော ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ခဲ့ပြီး ပုံများစွာ ရိုက်ခဲ့ရာ ချစ်စရာကောင်းသော အပြုအမူလေးနှင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အပြုံးတွေကြောင့် လူမှုကွန်ယက်တွင် နာမည်ကြီးလာခဲ့သည်။ Credit-Hlaing (Love …
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အကုသိုလ်ကံ လောကမှာ ယောကျာ်းနဲ့ မိန်းမ တွေ့ကြုံဆုံကွဲ ဖြစ်ကြရတာ ဓမ္မတာပါ ဘာထူးဆန်းလို့လဲလို့ မေးချင်စရာ ဟုတ်တယ် မထူးဆန်းဘူး ထူးဆန်းတာတာကတော့ အဲဒီမိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာမရှိ တန်ဖိုးမထား ကိုယ့်အပြင် အခြား အခြားသော မိန်းမတကာ မိန်းမတွေကို လစ်ရင်တွယ် ချောင်ရင်နှိုက် ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျာ်းကို ရထားပြီဆိုရင်တော့ အဲဒါ ထူးဆန်းနေပြီ။ ကျွန်မငယ်ရွယ်စဉ် စိတ်ဓာတ်မရင့်ကျက်ခင်ကာလတွေ တရားတွေ ကို နားနဲ့ပဲနာခဲ့ပြီး နှလုံးသားနဲ့ မနာတတ်ခင်ကာလတွေတုန်းက ယောကျာ်းတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို ဖောက်ပြန်တာ ခံရပြီဆို ပထမဦးဆုံး သူ့ကိုဒေါသထွက်တယ်။ ဒုတိယ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒေါသထွက်တယ် တတိယ သူနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းမကို ဒေါသထွက်တယ် အခုတော့ …
ဤတဘောင်ကို အမှတ်မှားသူများသိစေဖို့ #အဖိုးကြီးအို ခါးကုန်းကုန်း မသေပါနဲ့အုံး ရှေးနှစ်ခါ တန်ဆောင်မုန်းပွဲကြည့်ပါ အုံး။ သိသူဖော်စား မသိသူ ကျော်သွား တဘောင်များ #အဖိုးကြီးအို ခါးကုန်းကုန်း ဆိုသည်မှာ တို့တတွေဟာ ဘဝတိုင်း ဘဝတိုင်း အဖိုးကြီး အမေကြီး ဘဝနဲ့ အသက်အရွယ်ကြီးကြီးနဲ့ သေရတဲ့ ဘဝတွေ များခဲ့လှပါပြီ လူဖြစ်တော့ လည်း လူအဖိုးကြီး လူအဘွားကြီးငှက်ဖြစ်တော့လည်း ငှက်အဖိုးကြီး ငှက်အဖွားကြီး နွားဖြစ်တော့ လည်း နွားအဖိုးကြီး နွားအဖွားကြီး ကြက်ဖြစ်တော့လည်း ကြက်အဖိုးကြီး ကြက်အဖွားကြီး သူဌေးကြီး ဖြစ်တော့လည်း.သူဌေးအဖိုးကြီး သူဌေးအဖွားကြီး ဘုရင် ဖြစ်တော့လည်း ဘုရင်အဖိုးကြီး ဘုရင်အဖွားကြီး ဘဝ များစွာမှာ အရိယာ ဘဝက လွဲ၍ …
မိန်းကလေးများရဲ့ Top Secrets
မိန်းကလေးများရဲ့ Top Secrets မိန်းကလေးတွေရဲ့ အလန်းဆုံး အချိန်က Branded အမြင့်တွေ ကိုင်ပြီး ပွဲတက်တဲ့ အချိန် မဟုတ်ပါဘူး။ အိပ်ယာ နိုးနိုးခြင်း အိပ်ချင်မူးတူး ဖြစ်နေတဲ့အချိန်။ချစ်စရာ အကောင်းဆုံး အချိန်က ပါးလေးဖေါင်း နှုတ်ခမ်းလေး ဆူထားတဲ့ အချိန် မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်သူ့မှ ဂရုမစိုက်ဘဲ သဲသဲမဲမဲ အစား ငုံ့စားနေတဲ့ အချိန်။ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံး အချိန်ကမိတ်ကပ် နှုတ်ခမ်းနီတွေ ရွှိုင်းထားကာစ အချိန် မဟုတ်ပါဘူး။ သနပ်ခါး ပဲဟင်းအိုး မှောက်ကျသလို လူးထားတဲ့အချိန်။ အသဲယားဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်က… အတိုအပြတ်ဝတ်ပြီး Shopping ထွက်ချိန် မဟုတ်ပါဘူး။ စကားပြောပြောပြီး ခလေးလို ရှိုက်ရှိုက် ငိုတတ်တဲ့ …
သိပ်ချစ်ပါတယ်ပြောပြီး ဝေးသွားရမယ့်ဆက်ဆံရေးတွေ ဘဝမှာ တကယ်ရှိခဲ့ဖူးတယ်… သိပ်ချစ်ပါတယ်ပြောပြီး ဝေးသွားရမယ့် ဆက်ဆံရေးတွေ ဘဝမှာ တကယ်ရှိခဲ့ဖူးတယ် နာနာကျင်ကျင်နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ် ပြောပြီး တယောက်တည်း ကြိတ်ငိုရတဲ့ ညတွေငါ့မေတ္တာတွေ သူနားလည်လိမ့်မယ် အထင်နဲ့ အနစ်နာခံပြီး ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ နေ့တွေဓားသွား တွေလို ဆုပ်ကိုင်ရင် သွေးထွက် မှန်းသိရက်နဲ့ မလွှတ်နိုင်ပဲ ဆုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ လက်တွေမို့ မစာနာတော့ဘူးလားလို့လည်း မမေးရက်ဘူး ကျနော့်ကို ချန်ထားခဲ့လို့ ပျော်မယ်ဆိုရင် စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့် နဲ့သာ ချန်ရစ်ပါ ကျနော် နေရစ်ခဲ့ပါ့မယ်တယောက်တည်း အယောင်ယောင် အမှားမှားနဲ့ ကျနော်မရှိလဲ အဆင်ပြေမယ့် လူတစ်ချို့အနားက ပျောက်ကွယ်သွား ချင်တယ် ဒီလိုပါပဲ နာနာကျင်ကျင်နဲ့ လွှတ်ချခဲ့ဖူးတဲ့ လက်တစ်စုံကို ပြန်လာနိုးနဲ့ မျှော်လင့်ခဲ့ဖူးတယ် …
ယောကျ်ားတစ်ယောက် ထား သွားခံရလို့ မိန်ကလေး တစ်ယောက် ဘဝပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး….
ယောကျ်ားတစ်ယောက် ထား သွားခံရလို့ မိန်ကလေး တစ်ယောက် ဘဝပျက်မသွားနိုင်ပါဘူး…. မိန်းကလေး တိုင်း ဖတ်ဖို့ ယောကျ်ားတစ်ယောက် ထား သွားခံရလို့ မိန်ကလေး တစ်ယောက် ဘဝပျက်မသွားနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီ ယောကျ်ားကို ချစ်နေသေး တဲ့စိတ်ကြောင့်သာ ဘဝ ပျက်စီးသွားမှာပါ…. မိန်းကလေးတစ်ယောက် အယုံကြည် လွယ်တယ်ခံစားရလွယ်တယ် အားနာလွယ်တယ်အစွဲလမ်းကြီးတတ်တယ် ဆိုရင် နောင်တတွေနဲ့ အလိမ်အညာတွေပဲ ခဏခဏ ခံနေရမှာပေါ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောကျ်ား တစ်ယောက်ကို ဘယ်တော့မှ ခွင့်လွှတ်ပြီး ရှေ့ဆက်လက်မတွဲ ပါနဲ့အနေနီးမှုကို မလွန်ဆန်နိုင်ပဲ ဖောက်ပြန် တာဟာ အချစ်ကို ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူး…. မွေးရာပါ ဆင်ခြင်တုံတရား အားနည်းတာစာရိတ္တ သက်လုံ မကောင်းခဲ့တာပါပြောချင်တာကဆန္ဒ နဲ့ သိက္ခာကို ရွေးချယ်ရတဲ့အခါသိက္ခာကို သာ ဦးစားပေးပါလိုချင်တာနဲ့လိုအပ်တာကို …
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ (၁၀)မျိုး
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အောင်မြင်အောင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမ (၁၀)မျိုး ယောကျာ်းတစ်ယောက် အလုပ်ကိုင်အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ငယ်ရွယ်စဉ်က သူတို့ရဲ့မိခင်၊ ဖခင်တွေက အဓိကပံ့ပိုးမှုတွေ ပေးခဲ့ရတာပါ။ ဒါပေမဲ့အိမ်ထောင်ရက်သားကျလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖေါ်ရဲ့ ပံ့ပိုးမှုဟာ ပိုပြီးအဓိကကျသွားပါပြီ။ ပံ့ပိုးတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာ ငွေကြေးပိုင်းရယ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ကျန်တဲ့အချက်တွေနဲ့လည်း အများကြီးဆက်နွယ်နေပါသေးတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အအောင်မြင်ဆုံးနေရာကို တွန်းပို့နိုင်သလို အနိမ့်ကျဆုံးဖြစ်အောင်လည်း ဆွဲချတတ်ပါသေးတယ်။ ဒီတော့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ နေရာက ဘယ်လောက်တောင် အဓိကကျတတ်သလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုအချက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားရမလဲဆိုတာကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ ၁။ သဘောထားကြီးပြီး လူအကဲခတ်တော်တဲ့မိန်းမ သူမဟာ အင်မတန်မှ ပါးနပ်တတ်ပြီး သင်ရဲ့မျက်တတောင်တခတ်တွင်းမှာ သင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကို အကဲခတ်ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပြီး သင်ပျော်နေချိန်မှာ သင်နဲ့အတူပျော်ရွှင်မှုတွေကို အတူခံစားပေးတတ်ပါတယ်။ သင်မျက်မှောင်တစ်ချက်ကုတ်လိုက်လို့ ဘယ်လောက်ပဲ သင်ကပျော်ရွှင်ချင်ယောင် ဆောင်ပြဆောင်ပြ …
သိက္ခာရှိအောင်နေ မေတ္တာရှိအောင်နေ သိက္ခာရှိအောင်နေ မေတ္တာရှိတဲ့သူတွေ မင်းဘဝထဲရောက်လာလိမ့်မယ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ ဂရုစိုက် ရိုးသားခြင်း ထက်ပိုပြီး ချစ်မြတ်နိုး ဖို့ကောင်းတဲ့ အရာမရှိဘူး။ လောကသဘောက ရှင်းရှင်းလေးကိုယ်လုပ်တဲ့ ကောင်းကံ ဆိုးကံနောက်ဆုံး ကိုယ်ပြန်ခံရတာပဲ~။ မာနတွေ သိပ်မထားပါနဲ့ …မထားသင့်တဲ့ မာန်မာနကသင့်ကမ္ဘာကို ကျဉ်းမြောင်းစေပါတယ်။ လူတွေကို အပြုံးနဲ့ စတင် နှုတ်ဆက်ဖို့ ဘယ်တော့မှ ဝန်မလေးပါနဲ့။ အပြုံးတွေက တစ်ဖက်လူကို ပျော်ရွှင်စေသလို ကိုယ်တိုင်လည်း ပီတီ ဖြစ်စေ တယ်။ လူတိုင်းမှာ ဝမ်းနည်းစရာ ဆိုတာ အမြဲ ရှိပြီးသားပါ။ သင့်တစ်ယောက်တည်း မပျော်ရွှင်ပဲ ဝမ်းနည်းနေရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘဝဆိုတာ ဒင်္ဂါပြားတစ်ခုလို့ မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက် ခေါင်းနဲ့ ပန်းလို့ ပါပဲ …
“ကြောက်မက်ဖွယ် ကမ္ဘာရှေးဟောင်း ကျိန်စာများအကြောင်း”
“ကြောက်မက်ဖွယ် ကမ္ဘာရှေးဟောင်း ကျိန်စာများအကြောင်း” ကျိန်စာ Curse ဆိုသည်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက် အပေါ် ဘေးဆိုး အန္တရာယ် ကျရောက်ပါစေဟု တိုင်တည် ထားခြင်း၊ တန်ခိုးရှင်အား တိုင်တမ်းခြင်းကြောင့် ကျရောက်သော အန္တရာယ်၊ ကျိန်ဆဲခြင်း၊ ကျမ်းသစ္စာ ဆိုခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်းများ၊ ကပ်ဆိုးများ ဆိုက်ရောက်ပါစေ၊ ငရဲကျပါစေ ဟူသော ဆုတောင်း ကျိန်ဆဲမှုများကို ခေါ်ဆိုသည်။ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ခြင်း၊ ကျိန်စာတိုက်ခြင်း၊ ဆဲရေးခြင်း တို့သည် လူ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ လူသည် အရိုင်းဘဝမှ အယဉ်ဘဝသို့ တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာကတည်းက ထိုစိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာများ ပါလာခဲ့ကြသည်။ ရှေးစဉ်အခါမှ စ၍ ယနေ့ အချိန်ထိ ကျိန်စာတိုက်ခြင်း၊ …
Previous 1234567 8910 11 12 … 292 Next